Ihe niile banyere Beagle Lab Mix - Reeddịrị
Ihe niile banyere Beagle Lab Mix
Kedu ihe ga - eme mgbe ị gwakọtara ụdị ịhụnanya Labrador Retriever na nka ịchụ nta nke Beagle?
Nweta ngwakọ enyi na enyi, nke dị mfe ịzụ nke akpọrọ Beagle Lab Mix, nke a na-akpọkwa Labbeagle, Labbe, ma ọ bụ Beagador. Obe ndị a bụ na-eguzosi ike n’ihe ma dị nwayọọ ha na-eme nnukwu anụ ụlọ.
Ka anyị chọpụta ihe kpatara obe Beagle-Lab ji bụrụ otu n'ime nkịta ndị na-ewu ewu kachasị ewu ewu taa.
Gịnị bụ ngwakọta ụlọ nyocha Beagle?
Kedu ihe ngwakọta Beagle Lab dị?
Mmetụta ịhụnanya, nke siri ike
Ilekọta ụlọ nyocha na mix beagle: ihe ị kwesịrị ịma
Enwere nsogbu ahụike Beagle Lab na-eche ihu?
Ebee ka ị ga - achọta nwa nkịta Labbe?
Findchọta Beagle Lab na-agwakọta site na nkuchi
Ngwakọta a dị iche iche bụ ezigbo nkịta maka gị?
Mgbidi Beagle na Lab bu nkpuru mbu nke a Labrador nweta (Lablọ nyocha) na Ugogbe .
Beslọ nyocha na-abụkarị enyi na enyi, dị ike, ma nwee nkịta nwere ọtụtụ onyinye, mana akparamagwa na ọdịdị ha nwere ike ịbụ enweghị atụ , na-adabere n'àgwà ha ketara n'aka nne na nna ha dị ọcha.
Iji mụtakwuo banyere Beagador, ọ na-enyere aka ịmata banyere nne na nna ya mbụ.
Ihe ndị mmadụ na-atọ Labrador Retriever
E bido ụlọ nyocha ahụ na Newfoundland, Canada, a na-ejikarị ya eme ihe ịchụ nta mmiri . N'ihi ọdịdị ha dị ka nkịta na-arụ ọrụ , ndị Retrievers a nwere ọgụgụ isi, na-erube isi, ma dịkwa njikere ime ihe na-atọ ndị nwe ha ụtọ.
Nkịta ndị a nọgidere na-abụ ezigbo ndị enyi canine taa. Ha dị nwayọọ na-eme ka ha ezigbo nkịta na-eduzi ndị ìsì na ụmụ anụmanụ ọrụ nye ndị nọ na mkpa.
N'ihi ha enyi na enyi uwa , Labs bụ ndị ụdị kachasị ewu ewu nke 2018 , dị ka AKC si kwuo.
Beagle na-egwu egwu
Akụkọ banyere Beagle dị ntakịrị. Enwere ike ịchọta ụdị nke oge a obere hound eji soro heres na England na 1500s.
Nkịta ndị a na-ewu ewu n'etiti ndị dinta n'oge ahụ; n'ihi ha kọmpat size , Enwere ike iji Beagles ọbụna n'ụkwụ.
Mgbe ha gbasịrị United States mgbe agha obodo gasịrị, nkịta ndị a buru ibu bụ ndị a ma ama n'etiti ndị America na-achụ nta bekee, ndị hụrụ ụdị ìgwè ahụ n'anya ezi uche nke isi na nsuso usoro .
Beagadors na-ebutekarị kọmpat nke Beagle. Ọtụtụ n'ime ngwakọ ndị a nwere ogologo, warara muzzle na ntị nke na-agbada n'akụkụ ihu ha.
Beagle Lab mixes nwere a ezigbo, uwe ajị ajị dị mkpụmkpụ, nke nwere ike inwe agba dị ka ọcha, tan, ojii, odo, chocolate, oroma, na ọbara ọbara. Offọdụ n'ime ha nwedịrị ike ịnwe akwa nwere agba atọ ma ọ bụ mkpuchi.
Kedu nnukwu nkịta ndị a ga-enweta?
Beagle Lab mixes bụ a ọkara-nha crossbreed.
N'ịbụ onye tozuru oke, Beagador nwere ike iguzo 19 ruo 24 sentimita asatọ (48 ka 60 cm) n'ogo ma nwee nkezi nke 25 ka 40 n'arọ (11 ka 18 n'arọ).
Site na nha ya, ngwakọ a nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị maka obere oghere dị ka ụlọ.
Otú ọ dị, ọ ga chọrọ ọtụtụ ohere iji gbaa ọsọ ma chọpụta. Ga-achọ ịkpọrọ ya gaa ogige nkịta ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị iji nye ya ikuku ọhụrụ na ìhè anyanwụ.
Ọ ga-enwe obi ụtọ karịa n'ụlọ mbara mbara ebe ọ ga-agagharị. Naanị jide n'aka na etinyere nsu gburugburu ihe onwunwe gị iji mee ka nkịta gị nwee nchebe mgbe ọ na-egwu egwu.
Ha bụ hypoallergenic?
O di nwute, obe Beagle Lab di ọ bụghị hypoallergenic .
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nfụkasị ahụ na-eri nri, mgbe ahụ obe a nwere ike ọ gaghị abụ anụ ụlọ kachasị mma maka gị. Ha nwere ike ịnwe uwe dị mkpụmkpụ, mana Labbeagles ga-enweta ịwụfu dị arọ mgbe oge na-agbanwe.
Ọ bụrụ n'ezie na obi gị dị na aglọ nyocha Beagle, dị njikere iji igwe mkpochapu ugboro ugboro. I nwekwara ike ijide ịwụfu ahụ n'okpuru njikwa site na mgbe niile brushing na baths, nke ga - enyere aka wepụ ntutu nwụrụ anwụ na uwe nkịta gị.
Beagles na Labrador Retrievers na-ekerịta ọtụtụ àgwà, ya mere ngwakọta ụlọ nyocha Beagle ga-enwe àgwà yiri ya.
Beagador bu ọchịchọ ịmata na anya , na-achọ mgbe niile ịchọpụta ihe ndị gbara ya gburugburu.
Ọ ga-enwe mmasị iji oge nọrọ n'èzí ma na-eso isi na-achọpụta.
Dị ka Beagle, obe ndị a na-amụ anya ma nwee ike ịdị hyperactive . Ma, ka ha na-eto, ha nwere ike ịna-enwekwu ndidi na obi iru ala.
Ọtụtụ Labbes nwere a igwuri egwu ma adighi mfe àgwà, nke mere ha ezigbo ndị enyi maka ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile.
Ahụ ha siri ike karị ma e jiri ya tụnyere nkịta ha hà, n'ihi ya ụmụaka na-emerụ ha ahụ n'oge egwuregwu abụghị nnukwu nsogbu.
Ọ bụ ezie na ha nwere ọtụtụ ume iji chekwaa, ngwakọta ụlọ nyocha Beagle na-enwekwa mmasị iso ndị nwe ha na-akpakọrịta. Ha bụ na-eguzosi ike n'ihe ma nwee mmetụta ịhụnanya , ha ga-achọ ịrapara n'akụkụ gị ụbọchị niile.
Ha ga-ahụ ha n'anya ịnọnyere gị nke ukwuu nke na ha ga-ahụ nkewa nchegbu mgbe a hapụrụ naanị gị ruo ogologo oge.
Nsogbu omume nwere ike ime na Beagadors
Dị ka nkịta niile, ngwakọta ụlọ nyocha Beagle na-abịa na usoro nke nsogbu ya.
Akpa, ọtụtụ n'ime ndị a adọ ụdị ụfọdụ n'anya ogbugbo . Nke a bụ ihe ha ketara na Beagle, nke a zụrụ azụ n'ọnụ mmiri ma ọ bụ kpọọ olu mgbe ị na-achụ nta.
Na mgbakwunye ịgbọ ụja, na-atụ anya ịnụ ọtụtụ mkpu na mkpu site na Labbeagle. Mkpu niile ahụ nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ udo na jụụ n'ụlọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bi nso ndị agbata obi gị.
Lelee ụlọ nyocha Beagle a na-eti mkpu na siren:
Nsogbu ọzọ ị nwere ike izute na crossbreed a bụ nke ya nnukwu anụ oriri . Dika umu umu anumanu abuo, uzo Beagle na ulo nyocha gha enwe mmuo di ike ichu umu obere umuaka dika nwamba, oke bekee na hamster.
Mgbakwunye ga - enyere aka kụziere nkịta gị na anụmanụ ndị a pere mpe enweghị ike ịchụ ma ọ bụ ịchụ nta. Nke a dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere anụ ụlọ ndị ọzọ n'ụlọ.
I kwesịkwara ịma na Labbes nwere àgwà nke ita ahu mgbe ọ na-agwụ ha ike. Nwere ike igbochi nkịta gị ịtacha akpụkpọ ụkwụ ị hụrụ n'anya ma ọ bụ akwa gị dị oke ọnụ site na ị nweta ya ihe egwuregwu ụmụaka ma hụ na ọ na-enweta mkpali anụ ahụ na nke uche zuru ezu.
Ha bụ nkịta na-eme ihe ike?
Site na ọdịdị hyperactive ha na omume egwuregwu ha, Beagle Lab mix's ike nwere ike inye ndị mmadụ echiche na ha bụ ndị na-eme ihe ike.
Agbanyeghị, nkịta ndị a bụ ịhụnanya e kere eke . Nyere ihe nketa ha dị ka ndị enyi dinta, ha na ndị mmadụ na-anọkarị ma anaghị ewe iwe.
Dịka anyị kwurula, ha na anụ ụlọ ndị ọzọ ga-eme nke ọma, ma ọ bụrụ na enyere ha oge zuru oke maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Trainingzụ ngwakọta ụlọ nyocha Beagle
Ọbụghị naanị nke obe a na-eguzosi ike n'ihe ma na-echebe, mana ọ dịkwa nwere ọgụgụ isi .
Nkịta a na-enweta obi ya site na ụlọ nyocha, nke etinyere n'etiti ụdị smartest n'ụwa .
Befọdụ Beagadors, nwere ike keta karịa nke Beagle’s nnwere onwe .
Beagle ka a na-azụ iji soro nsinammuo ya mgbe ọ na-achụ nta, yabụ ejighị ya ịgbaso iwu nke ndị nwe ya.
Ihe ọ bụla nne na nna gị Beagle Lab mix na-ewe mgbe, agbanyeghị, ị nwere ike kuziri ya ezigbo omume site na a na-agbanwe agbanwe ọzụzụ .
Ọ ga-enye aka inweta ọzụzụ malitere dị ka o kwere mee, ebe nkịta gị ka bụ nwa. Pupp na-adịkarị mfe ịkụzi ihe ma ọ dị mfe itinye aka ma e jiri ya tụnyere nkịta ndị toro eto.
Cheta iji ugwo ugwo nkwalite dị mma dị ka ọgwụgwọ, otuto, ma ọ bụ ọbụna ihe egwuregwu ụmụaka kachasị amasị ha, ma n'otu oge ahụ jiri aka siri ike na-ejikwa ha. Ikwesiri iguzobe onwe gi dika mkpụrụ ya mere ọ gaghị agbagha ikike gị mgbe ị na-enye iwu.
Ma, cheta, ọ dị mkpa iji were oge ị chọrọ mgbe ị na-azụ ụlọ nyocha gị. Ndidi na ntachi obi, ọkachasị n'oge mmalite, ga-arụ ọrụ dị ogologo n'ịgbazi omume anụ ụlọ gị.
Mmekọrịta obodo bụkwa ihe dị mkpa iji zụọ nkịta gị, ọ kwesịrị ịmalite n'oge nkịta. Were ya na njem ebe ọha na eze dị ka ogige ma ọ bụ gburugburu agbata obi ka o wee nwee ike iji ọhụụ niile, ụda, na isi.
Wepụta oge iji gosi ndị ụlọ gị Labbeagle gị, ọkachasị anụ ụlọ ndị ọzọ. Nke a n’eme ka ndi ezinulo gi niile no na ukwu mee ihe n’udo.
Belọ nyocha adịghị achọ nnukwu oge ma ọ bụ ego mgbe ọ ga-elekọta; uwe mkpụmkpụ ya na-eme ka ọ dị mfe idozi ya ma ọ gaghị eri nri dị ka nnụnụ buru ibu.
’Ll ga-etinye mgbalị ụfọdụ ma a bịa n’inye ya mmega ahụ zuru oke, agbanyeghị. Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere nlekọta nke ngwakọ Beagle na Lab.
Otu esi edozi nkịta gị
N'ihi uwe elu ha dị mkpụmkpụ, ụlọ nyocha Lab Beagle dị mfe iji dị ọcha. O nwere uwe dị mkpụmkpụ, na-eguzogide ihu igwe, ihe ọ ketara n'aka nne na nna ya.
Maka uwe na-egbu maramara ma dị mma, a na-asacha ụlọ Labbe kwa izu . Jiri mgbochi ma ọ bụ uwe aka ka ị wee nwee ike wepu ntutu isi ya na uwe ya.
Otú ọ dị, emehiela; ọ ahụmahụ nhazi oge ma ọ bụghị hypoallergenic. Ọ na-ajụkarị mmiri mgbe oge a kara aka, yabụ dịrị njikere ịme ihe nhicha dị njọ kwa ọnwa ole na ole.
Nye nkịta gị a saa aru otu ugboro ma ọ bụ abụọ ọnwa atọ ọ bụla . Nke ahụ bụ ihe niile ọ chọrọ ka ọ dị ọcha; ịsa ahụ mgbe niile nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ ya na uwe ya mebie nsogbu akpụkpọ .
Beagle Lab mixes na-adịkarị mfe ibute ọrịa ntị n'ihi ntị ntị ha. Lelee ntị nkịta gị opekempe otu ugboro kwa izu ma jiri bọọlụ owu na ihe nhicha ndị a nwapụtara na-ehicha ha.
Ihe ị ga-eri Labbeagle
The Beagle Lab cross bụ ifịk nkịta na ya nri ga-akwagide ogo ume ya. Ọ ga-achọ kibble na a protein dị elu , ọ dịkarịa ala 20% na 25%. Nri na-enye aka ime ka nkwonkwo ya sie ike ma mee ka uru ahụ ya dịrị mma.
Anụ ndị sitere na anụmanụ dị ka azụ, ọkụkọ ọhụrụ, na beef niile dị ukwuu protein isi mmalite gị pooch. Gbalisie ike na kibble ya na-ebu ụzọ kọọ protein.
Obe ndị a chọrọ nri nkịta nke nwere ọ dịkarịa ala abụba 15% . Ihe oriri na-edozi ahụ na-enyere ha aka ịnọgide na-enwe ike ume ma na-eme ka akpụkpọ ahụ na uwe ha nwee ahụ ike.
Akwụkwọ nri starchy dị ka poteto dị ụtọ ga-enyekwa ya ume na-ere ọkụ nwayọ na-enweghị ike ịkpalite nsogbu ndị na-akpata ya ma na-akpata nsogbu mgbaze.
Ndị nne na nna Labbe nwere oke nri, yabụ ọ dị mma iche na ọ ga-enwe otu ụdị echiche banyere nri. Tụọ nri ya ma hụ na ọ nwetara naanị 1 ½ 2 ½ iko nke kibble akọrọ kwa ụbọchị, kewara abụọ nri.
Nke a na-eje ozi nha nwere ike ịdị iche iche dị ka afọ nkịta gị, ogo, na ọkwa ọrụ gị, yabụ ọ kachasị mma ịkpọtụrụ dọkịta gị maka usoro nri kachasị mma maka Labbeagle gị.
Jikere ịrụ ọrụ na Beagador
Emela ka ndudue nke ileghara ike ike nke Beagle Lab anya. Nkịta a nwere ike igwu egwu n’azụ ụlọ ụbọchị niile n’adaghị mbà.
Ọ ga-achọ dịkarịa ala otu awa mmega ahụ kwa ụbọchị ịhapụ ike ha niile gwụrụ ma nọrọ n'ụdị dị elu. Tụlee na-enweta ụdị ọzọ ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta nke gị na ya ga-atụkọ n’ute.
Nwere ike iji ngwakọ gị nwee ụdị ọrụ dị iche iche - ma ọ bụ ije ije na gburugburu agbata obi ugboro abụọ n’ụbọchị ma ọ bụ igwu mmiri na-egwu mmiri na ọdọ mmiri.
Belọ nyocha ahụ ga-enwekwa ike ịnagide ihe omume dị egwu dị ka hiking na njem osimiri . Nkịta a nwere mmasị igwu mmiri, n'ihi ụlọ nyocha ha.
Ngwakọta Beagle Lab chọrọ mkpali nke uche, kwa, ya mere ọ ga-enwe obi ụtọ egwuregwu egwuregwu dị ka ọzụzụ agility na nsuso. Ending na-etinye aka na oge ị ga - eme ihe ga - enyere gị aka ịmega iwu gị.
Ọ bụrụ na ị nwere azụ ụlọ, gbaa mbọ nye nkịta gị ọtụtụ pụọ-leash playtime .
Ngwakọta lab na Beagle na-adịghị ike maka nsogbu ahụike nke na-emetụtakarị ndị mụrụ ha.
Ma Beagle na Labrador, dịka ọmụmaatụ, na-adị mfe hip dysplasia .
Ọnọdụ ahụike ndị ọzọ Labbe nwere ike ihu nwere gụnyere nsogbu anya , ọdịdọ , hypothyroidism, na okomoko patellar.
Okpukpo a na-adi elu ma obu gastric dilatation oke , ọnọdụ na-egbu egbu nke na-eme mgbe oke gas na-agbatị ma na-agbanwe afọ.
Otu ụzọ ị ga-esi belata nkịta nkịta gị ịnwe ọnọdụ ndị a bụ na-enye ya nri kwesịrị ekwesị . Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na nri kwesịrị ekwesị ga-eme ka ahụ sie ya ike:
Carọt, poteto ụtọ, blọlbili, salmọn, na tuna nile nwere ha lutein na zinc , nke ga - enyere aka mee ka anya nkịta gị dị mma.
Mkpụrụ na-enweghị ọka, kibble bara ọgaranya ga-ebelata ohere nke nsogbu nri nri.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọgaranya na antioxidants na obere nri carbohydrate ga-ebelata ohere nke ọrịa kansa.
Ewezuga nsogbu ahụike ndị a, Beagador nwekwara ike ịdị mfe ọdụ oyi ma ọ bụ ọrịa ọdụ ụkwụ . Nke a na-apụtakarị mgbe ụbọchị nke ọrụ siri ike ma ọ bụ mgbe igwu mmiri na mmiri oyi. Echegbula; ọdụ nkịta gị ga-alaghachi na ọnọdụ wiggly ya mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị.
Lookingchọ puppy Lab ọzọ maka nwa bekee site na ebe a pụrụ ịtụkwasị obi nwere ike isi bụrụ nsogbu. Edtọ breeds nwere ike isi ike ịchọta, karịsịa kemgbe nwa nkita na-abụzi juru ebe nile n’oge a.
Inwere ike ichota ụmụ nkịta Beagle Lab maka ire ere dịka $ 600 onye ọ bụla, dabere na agbụrụ nne na nna ya.
Ọ bụrụ na ọnụahịa a dị ntakịrị nke ukwuu maka gị, ị nwekwara nhọrọ ịnakwere okenye Beagador site na ebe obibi.
Rewable Beagle Lab mix ndị na-eme ihe
O nwere ike ịbụ ihe aghụghọ ịchọta ndị na-azụ anụ na-elekwasị anya na ịmịpụta Labbeagles, ebe ọ bụ na ha anaghị ewu ewu dị ka obe ndị ọzọ dị ka Maltipoos na Morkies .
Ihe ị ga - eme bụ ka gị na ndị na - azụ Labrador Retrievers ma ọ bụ Beagles kpọtụrụ ma hụ ma ha nwere nke ọ bụla. crossbreeds maka ire ere . Lee ụfọdụ ndị na-azụ anụ ị nwere ike ịkpọtụrụ:
Lane Rae Beagles - Dabere na Florida, usoro a nke Beagle Mmemme anọwo ebe ebe 2009 ma na-enye Beagles maka anụ ụlọ na ebumnuche ngosi. Onye na-azụ ihe bụ AKC Breeder of Merit ma nwee mmekọ na National Beagle Club of America.
Cedar Ridge Beagles - Onye a na-azụ Iowa na-enye ọtụtụ ụmụ beagle, ọbụna ụmụ nkịta na akwa lilac ma ọ bụ ọla ọcha / uwe ojii. Ha na-ana $ 650 maka nwa nkịta ọ bụla, nke ga-enweta usoro ịgba ọgwụ mgbochi mbụ ya tupu ahapụ gị na nlekọta gị.
Zoro ezo ọdọ mmiri Labradors - Onye a na-azụ azụ na-ere ụmụ nkịta ojii, chocolate, na odo odo si New York. Ewezuga ụlọ nyocha nke ezigbo anụmanụ, onye na-azụ ihe nwekwara akara nke nkịta ọchụchọ na nnapụta na PTSD na nkịta ọrụ.
Prairie Rose na-ewepụta - Onye a na-azụ Missouri na-elekwasị anya n'inye Labrador Retrievers ndị e nyocharala maka ọnọdụ hip na ikpere na-enweghị onwe ha. Onye ọ bụla na-azụ ihe na-abịa site na nkwa ahụike 26 ọnwa.
Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ ị nweta nwa ọhụrụ ọhụụ n’aka onye na-azụ ihe, jide n’aka na ị ga-ajụ maka ya nne na nna ’medical health nakwa. Yingzụta Labbeagle site na onye na-azụ ihe nwere ike bụrụ ọnụ, yabụ gbaa mbọ hụ na ego gị ruru.
E wezụga onye na-azụ ihe, ụzọ ọzọ iji nweta crossbreed a bụ nnaputa otu n'ụlọ mgbaba gị. Nwere ike inye nkịta ụlọ ọhụrụ na ndụ site na nkuchi.
Cunapụta ụlọ Labbe bụkwa dị ọnụ ala ma ị nwere ike inwe obi ụtọ ịchọta nkịta okenye torolarị nke ndị nweburu ya zụrụ azụ.
Ndị a bụ ụfọdụ ụlọ ọrụ nnapụta ị nwere ike ịlele:
SOS Beagles - organizationtù a na-enweghị uru na-enye usoro ọgwụgwọ dịka ịgbapụ / nkwụ, microchipping, na ịgba ọgwụ mgbochi maka Beagles ha nwere maka nnabata. Ha nwere isi di na Alabama, New Jersey, na Tennessee.
BREW Beagles - Ntọala na 1999, a raara nzukọ a iji napụta Beagles na-eche ihu na euthanasia. Ha rehome beagles na ezinụlọ dị na Virginia, Maryland, West Virginia, Washington DC, Pennsylvania, Delaware, New York, New Jersey, na Massachusetts.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu ụlọ nnapụta - Peak Lab Rescue na-elekwasị anya na mbenata ọnụ ọgụgụ nke ụlọ nyocha na Lab Lab achọghị na North Carolina. Ruo ugbu a, nzukọ a echekwala ihe karịrị nkịta 6,000 site na gburugburu mkparị na ebe obibi dị elu.
Nkume Nkume Lablọ nyocha Rocky Mountain - Nke a obere otu ndị ọrụ afọ ofufo na-achọta ụlọ nyocha site na ndị ọrụ afọ ofufo ndo nke na-agwa ha banyere ọnụnọ nke nkịta ndị a na-egbu egbu. Nzukọ a dị na Colorado nwere Labradors toro eto na nke okenye dị maka $ 225 na $ 275.
Mixdị ngwakọta nke Beagle Lab nwere ike ịdị iche na nkịta ọ bụla.
Otú ọ dị, ọtụtụ n’ime obe ndị a ketara eketa omume enyi nke Labrador Retriever na ọchịchọ ịmata nke Beagle.
Labbes bụ na-egwuri egwu ma dị nwayọọ , nke na-eme ha ezigbo anụ ụlọ maka ezinụlọ nwere ụmụaka.
Ha bụkwa dị mma ma nwee mmetụta ịhụnanya , ya mere ha ga-enwe mmasị ịgbachi n'akụkụ gị na njedebe nke ụbọchị.
Agbanyeghị, Beagadors ga-achọkwa ọtụtụ mmega . Nke a nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu nkịta maka onye nwe oge mbụ, ebe ọ ga-ewe oge buru ibu maka mmega ahụ na ọzụzụ.
Kedu ihe ị chere gbasara Beagle-Lab ngwakọ? Kesaa echiche gị na ihe ndị a!
Bụ English Cocker Spaniel bụ ezigbo enyi?
husky na pomeranian mix ụmụ nkịta
esi etinye nkịta na nkịta
ezigbo aha maka imi na -acha anụnụ anụnụ